Spotify music free la Spotify 30 maalin maxkamad
Qaybta 1.How si aad u dalbato Spotify 30 maalin maxkamad
Qaybta 2.How in ay dhagaystaan ​​music free Spotify 30 maalin ka dib markii maxkamad
Awliyada mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka adeegyada tahay marka ay timaado music waa xaqiiqda ah in dhalashada Spotify ayaa xaqiijiyey in macaamiisha ay u korodho iyo sabab la mid ah waxaa la xaqiijiyey in account premium gabyi baaritaan waxaa loo ogol yahay maxkamad free 30 maalin marka ay saxiixdo adeegan si loo hubiyo in go'aanka ay awood samaynta dhibta iyadoo la kaashanayo gobolka adeegga farshaxanka. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan saxiixin maxkamadda lacag la'aan ah iyo kadib marka si free music la dhageysto.
1. Sidee ayaad u codsan Spotify 30 maalin maxkamad
Waxaa mar kale waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee Spotify in macaamiisha u oggolaanaya si aad u hesho sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay oo aan ka kaaftoomi kasta oo ay tahay in sidoo kale lagu xusay in user waa inay hubiyaan in tallaabooyinka la soo sheegnay ee tutorial aan la raacin oo keli ah, laakiin waxaa sidoo kale loo fuliyo hab la mid ah oo aan waxba ka boodday si loo hubiyo in wixii kaloo lagu sameeyo gudaha wakhtiga ay suurto gal ugu yaraan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa inay hubiyaan in tallaabooyinka lagu dabaqo mar kasta oo waxa uu ku hogaamiyay kasta oo xubin kale saaxiib iyo qoyska si ay u helaan adeega sida mid ka mid ah tayada Spotify waa in ay marna ma beddelo geeddi socodka iyo xitaa haddii ay sameeyo isbedel ay yihiin kuwo yar oo noocan oo kale ah in user marna wasaqaysanna leh arrintan la xiriira oo ay ku daboolan oo ay howsha caadiga ah in uu yahay ku lug. Hoos ku xusan waa hab dhameystiran si aad u hesho shaqo tayo qubbad iyo fasalka:
1. Bogga tijaabo ah adeeg waa in la heli si loo hubiyo in hannaanka waxaa keena. URL waa www.spotify.com/freetrial/
2. Isticmaalka markaas u baahan yahay in la hubiyo in button calaamad kor ku dhufto in la sii wado bogga macluumaadka:
3. account ayaa Spotify yahay markaas in laga heli:
4. Isticmaalka markaas u baahan yahay in la hubiyo in habka lacag bixinta ee la doorto sida doorashada user ::
5. Lacagta waa ka dibna in la xaqiijiyay in la hubiyo in dadka isticmaala helo raad ah oo lacag la'aan ah oo ah 30 maalmood. Waxaa sidoo kale in la ogaadaa in inkastoo of diiwaan habka lacag bixinta ee taada ee farsamo ahaan la eedeeyay wax u bixinta final weli eber:
2. Sidee inay dhegaystaan ​​music free Spotify 30 maalin ka dib markii maxkamad
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka muuqaalada tahay ee ay soo dhufto ee kala duwan iyo xal arrintan la xiriira soo socda yihiin.
1. Isticmaalka la FB
Talaabooyinka ugu muhiimsan ee ay u isticmaalaan Spotify arrintan la xiriira sida soo socota:
a. Account FB waa in lagu qortey,
b. Homepage waxaa markaas in la riixi:
c. Isticmaalka markaas u baahan yahay si loo hubiyo in ay ka Spotify music tab la xushay:
d. Spotify waxaa markaas in lagu daro FB iyo tan dhammeeyo habka buuxda
2. Dhegayso offline on iPhone
Sidoo kale waa mid ka mid ah adeegyada ugu fiican in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeeg tahay oo aan wax arrintan oo dhibaato sameeyo. Geedi socodka waa sida soo socota:
a. Codsiga Spotify waa in lagu xiro ay u duuban,
b. Account waxaa markaas in la qortey:
c. Playlists waa in la daah furo iyadoo la kaashanayo menu bidix:
d. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in badhanka cagaarka ah la isku soo riixayo in ay soo bixi playlist si ay u dhagaystaan ​​hab offline iyo waxa ay sidoo kale ka baxayo geedi socodka ee buuxa:
3. offline hab on Android
a. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in playlist edit offline la xushay marka app android ayaa laga soo saarey:
b. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in playlist in la synced waa riixi:
c. Hab offline waxaa markaas waa in la soo xulay si ay u hubiyaan in nidaamka halkan dhamaado;
4. Saarashada heesaha
Geedi socodka waa mid fudud oo ayaa lagu sharaxayaa sida under:
a. Taariikhqorihii A dhawaaqa in ciyaara oo uu helo tareenka duubay waa in la soo bixi website kasta oo wax loo maleeyey in arrintan la xiriira:
b. Spotify waxaa markaas in la furay:
c. Barnaamijka wax lagu qoro waa la in la furay:
d. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in madaxdii gabayga oo ka mid ah liiska waxaa lagu ciyaaray si barnaamijka lagu qoro shaqo ka bilowdey in ay sida ugu badan oo iyaga ka mid yihiin is keenaysay la shaqeeyaan faragelinta ugu yar sameeyo:
e. Heesaha ayaa si toos ah loo diiwaangelin doonaa oo sidoo kale lagu soo bixi nidaamka aan wax arrintan iyo dhibaatada iyo waxa ay sidoo kale waa inuu xaqiijiyo in nidaamka halkan ku dhammaanaysaa oo tayo leh,
Macmiilka version 5. desktop Free
User wuxuu u baahan yahay in la raaco nidaamka sida hoos si aad u hesho natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira in sidoo kale iyaga keeni karto in ay online iyo offline Spotify lacag la'aan ah:
a. Bogga internetka ee Spotify waa in ay booqasho:
b. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in xisaabta la casriyeeyay,
c. Macmiilka desktop waxaa markaas t laga soo degsan si ay u hubiyaan in music free waxaa ku riyaaqay:
Marka maxkamadda lacag la'aan ah ayaa ku dhameysatay kaalinta user markaas u baahan yahay si loo hubiyo in uu macmiilku ku uninstalled iyo dib mar kale in samaysay shaqada iyo in la hubiyo in Spotify 30 maalmood raad xorta ah waxaa ku riyaaqay sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Spotify ayaa had iyo jeer ku soo kor fikradaha dakhli laakiin ilaa hadda isticmaala ay ka walaacsan yihiin ay u hubiso in ay habab kale oo lagu horumariyo si free music waxaa ku riyaaqay oo aan wax arrintan oo dhibaato ka dhigi lahaa. Waxaa sidoo kale in la xuso in dadka isticmaala ay arrintan la xiriira waa inay hubiyaan in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-tahay waa la fuliyay sida kor lagu soo sheegay oo ah in ay dhacdo madmadowga wax user waa in la hubiyo in talada khabiir waxaa ay sidoo kale doonayaan in ay ka dhigaan fogaado arrin kasta oo gebi ahaanba.
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPad si iPhone
Deezer vs. Spotify, halkan waa la barbardhigo dhameystiran
> Resource > Music > Dhagayso Spotify Music Free Iyadoo Spotify 30 Trial Day